Noqo Shiinaha Hot- iibinta kf94 daboolka wejiga Mashiinka samaynta/f94 wejiga/kf94 korea/kf94 warshad mashiinka iyo soo saarayaasha |HRF
Mashiinka maaskarada ee KF94
Iibinta kulul ee kf94 daboolka wejiga Mashiinka samaynta/f94 wejiga/kf94 korea/kf94
Mashiinka oo dhan wuxuu ka kooban yahay qaybta sheyga, qaybta sare ee sanka, qaybta alxanka qaabka, samaynta laalaabida, qaybta jarjarida, qaybta leexinta, qaybta qaybinta, qaybta suunka dhegta, iyo qaybta ururinta.
1.Material frame part: hawo ballaarinta hawada, biriiga budada magnetic iyo xakamaynta si loo hubiyo in xiisadda maaddadu aysan ahayn laalaab.
Qeybta sanka sare ee 2.Upper: dhululubada waxaa lagu dhejiyaa hirarka ultrasonic si loo hagaajiyo xariiqda sanka dhererka loo baahan yahay alaabta.
3.Qaybta alxanka qaabeynta: caaryada waxay ku habboon tahay hirarka ultrasonic, iyo alxanka texture ee bilowga ah.
4.Laalaabista: dhar isku laabma
5.Qaybta gooyaha qaabka: gooyo-caado-dhigay, samaynta duub-jaridda, wakhtigan maaskarada ayaa markii hore la sameeyay
Qaybta 6.Flip: maaskarada u rog si aad ugu diyaargarowdo xargaha dhegta 7.Qaybta: Qaybinta macquulka ah, korodhka awoodda wax soo saarka on maaskaro semi-dhammeeyey oo leh ultrasonic, iyo maaskarada ayaa la sameeyay wakhtigan 9.Qaybta ururinta: soo saar suunka, ururinta alaabta.
Cabbirka maaskaro laablaaban oo lagu dabaqi karo Maaskaro la laaban karo oo leh cabbirka suuqa
Balaadhka alaabta Marka loo eego cabbirka alaabta
Awood wax soo saar 45± 5pcs/daqiiqo
60 Koronto ku habboon 220V/380V,50HZ/60HZ
Sahayda hawada lagu dabaqi karo 0.5∽0.7Mpa
awoodda lagu qiimeeyay 7.5kw
Cabbirka mashiinka 5700mm x 4500mm x 1900mm
Miisaanka mashiinka Marka loo eego qayb, hal qayb ayaa ka yar 200KG
Hore: Mashiinka samaynta maaskarada kf94 oo toos ah oo buuxa
Xiga: N95 waji-xidho si toos ah oo toos ah u sameeya khadka wax soo saarka mashiinka
Mashiinka Xirmooyinka Maaskarada ee Kf94
Kf94 Maaskarada Mashiinka Baakadaha Auto
Naqshadaynta Makiinada Maaskarada ee Kf94
Kf94 Mashiinka Maaskarada Samaynta
Kf94 Mashiin Samaynta Maaskarada
Mashiinka Xirmooyinka Maskaxda ee Kf94
Kf94 Maaskarada Soo saarista Maaskarada
Mashiinka Soo saarista Maaskarada ee Kf94
Maaskarada Kf94 Machine
Mashiinka Maaskarada Kf94
Mashiinka Soo saarista Maaskaro ee loogu talagalay Kf94
Si toos ah oo toos ah kf94 Wajiga Maaskarada Samaynta Mashiinka/f9...